Adeegga - Qingdao Zhuoya Machines Co., Ltd.
Waxaan u fidinaa adeeg hal-joojin dhammaan macaamiisheenna si daacad ah.
Injineerada xirfadleyda ah si ay u siiyaan talo farsamo oo horay-u-iibinta iyo hagida taageeraysa qorshaynta, sida xulashada unugga, is-waafajinta, qaabeynta qolka, ka jawaab su'aalaha adag ee uu kala kulmo isticmaaley inta lagu gudajiro oo ay ku siiyaan hagitaan farsamo.
Shirkaddayadu waxay u diri doontaa shaqaale xirfad-yaqaanno ah iyo farsamo goobta rakibaadda ee loogu talagalay rakibaadda iyo u-diridda unugga kadib markay helaan ogeysiiska isticmaalaha, oo waxay shaqo wanaagsan ku qabtaan aqbalaadda isticmaalaha. Qaybta caadiga ah ee mas'uul ka ah hagidda rakibaadda, u xilsaaridda.
Xilliga damaanada: laga bilaabo taariikhda la aqbalo ama taariikhda hal sano oo damaanad urursi ah 1000 saacadood (mid kastoo dhacaaba labadaba), natiijada ka dhalanaysa qaybaha warshadaha ay soo ururiyeen dayacaad ama naqshad aan habooneyn iyo xulista agab ceyri ah iyo asbaabo kale oo sababay burburka ama qeyb kale. khalad, waxaa laga yaabaa inuu mas'uul ka noqdo dammaanad qaadaha iibiyaha.
Waxaan had iyo jeer u hoggaansanahay dareenka sare ee mas'uuliyadda, si aan u siino habeyn nidaamka adeegga iibka ah ka dib oo ay ku jiraan tilmaamaha rakibaadda, buugga qalliinka oo faahfaahsan, tababbarka habka dhammaystiran, habka saxda ah ee shaqaalaha, si aan uga caawino la-hawlgalayaashayaga sidii loo xallin lahaa dhammaan walwalka waqtiga ku habboon soo-saarka mustaqbalka.
Si loo hubiyo socodsiinta wanaagsan ee khadka wax soo saarka, waxaan u diyaarin doonnaa qof farsamo oo dhameystiran inuu halkaas u sii joogo taageerada lagama maarmaanka u ah, illaa khadku si hagaagsan oo joogto ah u socdo muddo.
Muddada damaanada gudaheeda, waxyaabaha kale ee ugaarsiga ah ee waxyeeladu soo gaartay lama badali doono si bilaash ah, mudada damaanadkuna dib ayaa loo dhigi doonaa sidaas. Bedelida qaybaha ka baxsan waqtiga damaanada waxaa la bixin doonaa waqtigeeda waxaana lagu dallacayaa kaliya kharash.
Haddii lagu jiro mudada dammaanadda iyo in kale, waxaan ku jawaabi doonnaa labo saacadood gudahood markaan helno macluumaadka jebinta khadka mashiinka. Haddii loo baahdo, waxaan diyaarin doonnaa qof farsamo sidii uu u dayactiro khadka mashiinka sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Shaqaalahayagu kama tagi doonaan illaa laga saaro meesha qaladka laga saaro oo khadka khadka si sax ah u shaqeeyo.
Si loo hubiyo socodka wanaagsan ee khadka wax soo saarka, marka lagu daro macluumaadka qoraalka ah ee la bixiyay, waxaan sidoo kale diyaarin doonnaa shaqaale farsamo si ay u tababbaraan howlgalka, shaqaalaha dayactirka macaamiisha, ilaa ay ka maareyn karaan dhammaan howlaha iyo nidaamka dayactirka gebi ahaan iyo xirfad ahaan.
Waxaan sameyn doonaa wax aan ka yarayn hal booqasho sanad kasto ka dib markii makiinaddeena la iibiyay. Su'aalaha ka yimaada macaamiisha, waxaan sameyn doonaa sixitaan dhab ah si aan uga dhigno qalabkii hore inay iskudayaan inay la jaanqaadaan shuruudaha xaalada cusub.
Waxaan siinaa adeegyo latalin teknolojiyad muddo dheer ah la-hawlgalayaashayada lacag la’aan.
Muddada damaanada waa inay ahaataa hal sano laga bilaabo taariikhda aqbalida kama dambaysta ah.